inguqulelo 0.3.3 – 9 ngeelwimi ezintsha
EyoMsintsi 6, 2009 ngokuthi umnikelo 12 izimvo
Singathanda ukubulela uphando ukwengeza inkxaso ukuze 9 ngeelwimi ezintsha: Isibhulu, IsiBhelarushiyen, Iceland, Irish, Mecedonian, Malay, Swahili, Welsh and Yiddish. Yokuba inkxaso plugin yethu WordPress owazeka okwethutyana ngenxa yokumpompoza elandelayo ebaluleke. Yintoni iflegi sifanele sisebenzise i Yiddish? Into yokuqala singathanda ukuba bathi kukuba yenarha are ziyatshintsheka, ulandele nje FAQ kwaye ukuba ngaba ungathanda ukukhetha zethu, akukho namnye uphika kuwe.
Emva kwengxoxo emfutshane siye sagqiba ukunika Yiddish kwimanyano iflegi European yezizathu ngenxa ezibini, Nye – ulwimi isuka khona, kungekhona naliphi na ilizwe elithile nowesibini – iflegi akemi kulo naliphi na ilizwe ethile ngendlela efanayo ulwimi engenako kuqhagamshelwa kulo naluphi na ilizwe. Ukuba nabani na iziphakamiso ezingcono, ivulekile ukuva ukuba thina.
Le ukukhululwa kwakhona ilandela kwiiveki ezimbalwa cwaka, apho siye cwaka ecinga nokuxoxa iimpawu ezintsha, yaye sithemba ukuba siza kukwazi ukukhulula kungekudala, naluphi na uncedo kunye nengxelo akuyi kuphela kuthakazelelwa kodwa thina siya kukunceda ukunikezela imveliso engcono.
ifayilishwe Phantsi: izaziso Release ephawulweyo Nge: sprites iflegi, uphando loshintsho magama, engephi, kweelwimi ezininzi, khulula, Java Wordpress
inguqulelo 0.2.8 – Sprites CSS
EyeKhala 19, 2009 ngokuthi umnikelo Shiya Comment
Inguqulelo entsha wongeza inkxaso zovavanyo kulungiselelwa sprites CSS. Oku kunciphisa ixesha ukulayisha ikhasi (xa isebenza) aziphucule isantya page ye Google kunye namanqaku Yslow Yahoo kaThixo. Kukho kwakhona iseti ikhowudi lokuphela-umva leyo evumela sprites ukuba kudalwa ukuba ilingane iimfuno zomntu (ukuba kuphela iiflegi ezintandathu kwaye 40, kutheni usebenzise umfanekiso 12k?). Oku engekafumaneki – kodwa anganika iifayile echanekileyo nabani na ofuna ukuba, qhagamshelana nathi nje okanye amazwana kule posi. Kwakhona sinqwenela ukubulela ngokukodwa marek Fišer ngokuba uncedo lwakhe kunye CSS leyo basivumela ukuba lokuyigxotha le blank.gif ngoku engenamsebenzi, nje kuphela iifayile CSS kodwa kule translation interface.
A bugs ezimbalwa ilungiswe kulo nguqulo, ukusuka ukusebenzisa livewriter kwingxaki abuyela kulwimi lwantlandlolo le widget, i log utshintsho umhlobo wakho apha.
enye isicelo – nceda sebenzisa nghi yethu (trac.transposh.org) ukuba ifake bugs, le kusinceda (kwaye wena) ukufumana iimpendulo ngcono yaye umkhondo kwi bugs inkqubela, kwaye ivumela ukuba siphephe umsebenzi nempinda.
Siyathemba uya kunandipha sokukhululwa.
ifayilishwe Phantsi: izaziso Release ephawulweyo Nge: sprites CSS, sprites iflegi, engephi, khulula, Java Wordpress
sprites CSS ezayo
EyeKhala 9, 2009 ngokuthi umnikelo 3 izimvo
Inguqulo elandelayo, nto leyo eza ekupheleni kweveki ezayo iza kuquka inkxaso sprites CSS le widget iflegi. Oku banamalungelo ngokwemiqathango isantya kunye nenani lezicelo ezenziwa web server kwi. Ikhowudi sele iqhuba kule sayithi kwaye singakuvuyela ukuba usazise ngayo nayiphi na imiba nazo kwicala lomxhasi (browser non standard – IE6, etc).
Nabani na ufuna ukuthatha ikhowudi ye spin, na ngaphezu yamkelwa ukuba uqhagamshelane nathi ukufumana pre-ukukhululwa ikhowudi.
ifayilishwe Phantsi: Imiyalezo Jikelele ephawulweyo Nge: sprites CSS, sprites iflegi